Carphone Warehouse oo xiraysa dukaammo - BBC Somali
Carphone Warehouse oo xiraysa dukaammo
Shirkadda Carphone Warehouse, ayaa ku dhow in ay xirto ilaa 11 bakhaaradeeda Best Buy ee UK oo dhan, sida shirkaddu ay ku dhawaaqday.
Tallaabadan ayaa ilaa 1.100 shaqo qatar galin doonta oo shirkadda shaqaalaha u shaqaynayay ah.
Bakhaaradan, ayaa iibiya qalab koronto, balse shirkadda ayaa sheegtay in ay rajaynayso in la helo shaqo ballaaran oo dadkan ay u badashaan.
11 Bakhaar ee loo yaqaan Best Buy waxay ka tirsan yihiin Best Buy Europe, oo ah shirkad ay wada leeyihiin kooxda Us group ee Best Buy iyo shirkaddaa Carphone Warehouse.
Bakhaarkii ugu horeeyay ee Best Buy, waxaa UK laga furay bishii April ee sanadkii hore. waxay ku guuldaraysteen in faa'ido laga helo.
Bakhaarada Best Buy, waxay ku yaalleen magaalooyinka Liverppol, Derby, Bristol, Nottinham, Rotherham, Dudley, Thurrock, Southampton iyo sadex meelood oo London ku yaallay sida Croydon, Hayes and Enfield.
Best Buy Europe, waxaa la sameeyay sanadkii 2008 markii Best Buy ay bixisay ilaa 1.1 billion si ay u iibsato 50% saamiga qaybta tafaariiqda ee bakhaarada Carphone Warehouse ay ku lahayd qaaradda Europe.
Shirkadda Carphone Warhouse waxay hadda xoogga saaraysaa iibinta qalab badan oo koronto oo lagu iibiyo 805 bakhaar oo Best Buy leedahay oo ku yaalla UK, iyo ilaa kun lix boqol iyo afartan iyo sideed dukaamo lagu iibiyo telefoonada oo qaaradad europe oo dhan ku yaalla.
Best Buy, waxay sheegtay in ilaa sanadkii 2008 in si xoog leh uu isku badalay suuqa macaamiisha qalabka korontada, taasoo ay ugu wacnayd waqiyada dhaqaale, horumarka iibka interenet-ka iyo kororka qalabka cusub sida telefoonada casriga ah, qalabka wax lagu aqristo ama computer-ada iyo barnaamijyadaba.